२०७७ माघ १८ आइतबार ०३:०१:००
७२ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १६ लाख नेपालीलाई खोप लगाउन चार करोड ३२ लाख डोज आवश्यक पर्छ । १० लाख डोज दिएको भारतले थप १० लाख दिने आश्वासन दिएको छ । चीन र बेलायतबाट केही लाख डोजको अपेक्षा, खरिदको भने टुंगो छैन ।
भारतले अनुदानमा दिएको खोप अहिले धमाधम लगाइएको छ । चीन र बेलायतले पनि सीमित संख्यामा डोज दिने भनेका छन् । तर, खरिद गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङ्करीका अनुसार थप खोप खरिद गर्न भारतीय कम्पनी सेरमसँग छलफल भइरहेको छ । ‘भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज आएको छ, तर थप खोप खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल सुरु भएको छ । अहिले अनुदानमा आएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड हो । त्यही खोप ल्याउने विषयलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने ।
सबै जनतालाई तीन महिनामा खोप लगाउन सम्भव नभएको डा. तिङ्करीको भनाइ छ । ‘दुनियाँमा यसै पनि मागअनुसार खोपको उत्पादन भएको छैन । त्यसको खरिद, अयात र वितरणका आफ्नै प्रक्रिया छन् । अब तीनदेखि चार महिनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि सबै जनताले खोप कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । उनले तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्न भने सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । ‘तीन महिनामा सम्भव छैन । यो विषय खोपको उपलब्धतामा भर पर्छ । खोप उपलब्ध भयो भने लगातार लगाउँदै जान सकिन्छ, सरकारले खरिदको योजना पनि बनाएको छ, तर उपलब्ध नै भएन भने कसरी गर्ने ?’ डा. गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अर्को छिमेकी चीनले पनि करिब तीन लाख डोज खोप दिने तयारी गरेको छ । तीन लाख खोपले करिब डेढ लाख नेपालीलाई खोप लगाउन मिल्नेछ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालका अनुसार खोपका सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नै समन्वय गरिरहेको छ ।
चिनियाँ राजदूतावासले परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । ‘खोपको दर्ता प्रक्रियालगायत केही प्राविधिक विषय टुंगिन बाँकी छ, केही दिनमा यो काम सकिएपछि पहिलो चरणमा अनुदानमा कम्तीमा तीन लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने चीनको तयारी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
तीन लाख डोज दिएपछि पनि थप अनुदानमा उपलब्ध गराउने आश्वासन चीनले दिएको सरकारी स्रोतका भनाइ छ । तर, खोप भने सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । ‘नेपालको चाहना र आवश्यकताअनुसार सुलभ मूल्यमा खोप बिक्री गर्न पनि चीन तयार छ, सन्देश त्यही आएको छ,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने ।
खोप अनुदान दिन भारत र चीन इच्छुक देखिएका छन्, तर खोप खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया भने अर्थपूर्ण रूपमा अघि बढेको छैन । नेपालले कति खोप खरिद गर्न खोजेको हो, कहिलेसम्म चाहिने हो भनेर भारत र चीनका दूतावासले पटक–पटक नेपाल सरकारलाई सोधिरहेका छन् । तर, सरकारका विभिन्न संयन्त्रबीच समन्वय नभएकाले नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई ठोस जवाफ दिन सकेको छैन ।
भारतले अनुदानमा दिएको खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो । त्यही खोप सहुलियत बिक्री गर्न सेरम इन्डिया तयार छ, तर खरिदको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार सेरम इन्डियाले भारत सरकारलाई बेचेकै मूल्यमा नेपाललाई बेच्ने वचन दिएको छ । ‘प्रतिडोज तीन सय ५० देखि चार सय रुपियाँ भारुका दरले नेपाललाई खोप बिक्री गर्न सेरम इन्डिया तयार छ,’ सुवेदीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल आपूर्तिका लागि ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट आएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा दुई महिनाअघि भारत सरकारलाई लेखिएको पत्रमा भारतबाट नेपालले कम्तीमा २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी खोप खरिद गर्ने चाहना व्यक्त गरिएको थियो । भारतले कम्तीमा तीन प्रतिशतका लागि अनुदानमा दिने भनेकाले थप १७ प्रतिशत जनताका लागि भारतबाट औषधि खरिदका विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, सहमति भने हुन सकेको छैन ।
खरिदको विषयमा चिनियाँ पक्षले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नेपालको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव गएको छैन । ‘कति खोप चाहिने हो, कहिलेसम्म चाहिने हो र नेपालको बजेट के हो भन्ने विषयमा चीनले चासो राखिरहेको छ, तर यताका विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा जवाफ दिन सकिएको छैन,’ परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतमा किनेर नेपाललाई खोप दिने बेलायतको तयारी, रुसी खोपमा प्रगति भएन
नेपालले सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको बेलायतले पनि नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ । ‘बेलायतले भारतसँग समन्वय गरेर खोप अनुदानमा दिने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ, तर औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नेपालले खरिद गर्ने वचनबद्धता जनाएमा सानो संख्यामा स्पुतनिक खोप दिने जानकारी रुसले पनि दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पुतनिक खोपलाई मान्यता नदिएका कारण रुसी खोप लिने विषयमा नेपाल स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, रुसी कूटनीतिज्ञहरू भने स्पुतनिक किन्ने विषयमा नेपाललाई सहमत गराउने प्रयासमा छन् ।
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीले भने खोपबारे छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएका छन्, अनुदानमा दिने–नदिने केही भनेका छैनन् । खासमा युरोपमा महामारीको दोस्रो लहर आएकाले ती देश अहिले खोप बेच्ने होइन, खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
दोस्रो चरणमा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ६४ हजार दुई सय ६९ जनामा खोप लगाउने योजना छ । त्यसैगरी तेस्रो चरणका लागि ४० देखि ५४ वर्षका बाँकी सबै ९.५५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख एक हजार एक सय चारजना छन् । तेस्रो चरणमै १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका सबै ४२.०७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई खोप लगाइनेछ ।